Maxkamadda ICJ oo Leyn cusub u sameysay Xuduudka Badda Somaliya iyo Kenya (Daawo Khariirada ICJ) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, ayada oo diiday doodda ugu weyn ee Kenya ee ku doodaysay inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka.
Dhul badeedkii la isku hayey ayaa dhan 100,000 oo isku wareeg KM ah. Waxaa qeyb ka mida ay Maxkamadda ICJ raacisay dalka Kenya, iyadoo intiisa badan u xukmisay Soomaaliya. Leynka cusub ee Maxkamadda u dhigtay xuduudka Badda ee Somaliya iyo Kenya ayaa macne weyn yeelanaya marka uu sii aado gudagha badda ila 200NM.
Line-kii tooska ahaa ee Soomaaloiya rabtay iyo leynka cusub
Leynka cusub ee xuduudka Badda ay Maxkamadda ICJ sameysay
Previous articleMaxkamada ICJ oo Go’aan kasoo saaray Dacwadii Badda ee Somalia iyo Kenya (Guul Somaliya gaartay)
Next articleAkhriso: Go’aanka Maxkamadda ICJ kasoo saartay Dacwadii Xuduudka Badda ee Somaliya iyo Kenya